Pirlo oo ka hadlay xaalada dhaawac ee Paolo Dybala.
Home Horyaalka Italy Pirlo oo ka hadlay xaalada dhaawac ee Paolo Dybala.
Tababaraha kooxda Juventus Andrea Pirlo ayaa meesha ka saaray cabsida laga qabo in Paulo Dybala uu u baahan doono qaliin dhaawac jilibka ah kooxda ayaa haatan go’aamin doonta ‘daaweynta ugu fiican’ isaga.
27 jirka ayaa garoomada ka maqnaa muddo lix isbuuc ah dhaawac jilibka ah mana uusan soo muuqan tan iyo markii ay kooxda 3-1 kaga badiyeen Sassuolo 10kii Janaayo.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Argentina ayaa u duulay magaalada Barcelona isagoo xubin ka ah shaqaalaha caafimaadka ee kooxda Juventus horaantii todobaadkan si uu ula tashto takhasus gaar ah oo uu la yeeshay dhakhtar qalliinka jilibka ka dib markii uusan arkin wax horumar ah in ka badan hal bil.
Waxaa jiray cabsi laga qabay in qalliin loo baahdo taas laakiin ka hor kulanka Juventus ee Serie A ee sabtida, Pirlo wuxuu xaqiijiyay in Dybala uusan ku dhici doonin mindi laakiin uusan bixin karin waqti uu ku soo laabto.
“Marka loo eego Paulo, waxaan qiimeyneynaa xalka ugu fiican ee aan uga dhigi karno sida ugu dhaqsaha badan,” ayuu yiri qadka dhexe ee hore.
‘Dybala halis uguma jirto qalliin. Wuxuu lahaa la tashi hadana waxaan arki doonaa waxa daaweynta ugu fiican ay noqon doonto ‘Waqtiga soo kabashada ee Dybala nasiib darro waa la dheereeyay mana aanan awoodin inaan dib u soo celino.’
Dybala ayaa lagu bilaabay kaliya sideed kulan oo horyaalka heerka labaad ah xilli ciyaareedkan waxaana uu soo muuqday 11 kulan oo horyaalka ah guud ahaan, isagoo dhaliyay labo jeer isla markaana caawiyay inta ugu badan.
Xiddiga reer Argentine ayaa u muuqda inuu seegi doono kulanka muhiimka ah ee horyaalka ee ay la ciyaarayaan Lazio isbuuca soo socda iyo sidoo kale lugta labaad ee Champions League ay la dheelayaan Porto.
Xidigha Pirlo ayaa isku soo taagay ka dib qaladaad dhanka daafaca ah oo ay ku arkeen guuldaradii 2-1 ee ka soo gaartay Estadio do Dragao 10 maalmood ka hor.
Previous articleKoeman oo Soo saaray Liiska uu kaga hortegaayo Sevilla iyo Ronald Aruojo oo kusoo laabtay Safka barcelona.
Next articleReal Madrid oo diyaar u ah inay iska dirto Eden Hazard haddii uu yimaado Kylian Mbappe